Ahoana ny fomba hivoahana amin'ny kamio aorian'ny rivo-doza - Ellicott Dredges
Ny Tetikasa voalohany
Amin'ny fotoana iray, mihoatra ny 4 tapitrisa galon (1,514 tapitrisa litatra) mikoriana ny paozin'ny semi-fitsaboana poizina mankany amin'ny Palm Bay Florida's Turkey Creek. Vokatr'izany dia misy poizina sy otrikaina manimba be dia be ao Turkey Creek.
Nandritra ny lohataona 2017, ny ekipa dia Gator Dredging nandany ny ankamaroan'ny fotoanany nifantoka tamin'ny fanadiovana ny korontana izay taloha no nibodo an'i Turkey Creek, ka nanalavitra ny 236,000 yd3 (180,435 M3) of muck, ny azota ary ny fihanahan'osy.
Ny karazana fitaovana mety
Rehefa miasa amina tetikasa iray ny haben'ny Turkey Creek dia mila fitaovana tsara ianao. Ho an'ity tetikasa ity, Ellicott Series 670 Dragon® dredge no voafantina. Ny 670 dia afaka mihady lalina hatramin'ny 42 metatra (13.0 m) ary misy paompy be habe amin'ny herin-tsoavaly maro ilaina mba hamita ny asa an'ity habeny ity. Ilay andiana 670 dragona® Ny dredge dia fantatra ho toy ny môtô tokana azo itokisana sy azo itokisana ary ambony indrindra.
ny voalohany Turkey Creek fanadiovana nandany volana maromaro mba hamitana azy io, saingy rehefa nanakaiky ny tetik'asa dia nihevitra ireo antoko rehetra voakasiky ny fanadiovana voalohany fa saika vita ny asan'izy ireo. Na izany aza, tsy fantatr'izy ireo fa efa akaiky ny loza voajanahary iray izay hanafoana ny asa mafy sy ny ezaka teo aloha.
Tamin'ny septambra 11, ny 2017, ny rivo-doza Irma dia namely ny Golfa any Florida, ary nampisy olana lehibe tondra-drano ao amin'ny vondrom-piarahamonina Turkey Creek akaiky izay akaiky an'i Gainesville. Fanindroany tao anatin'ny roa taona latsaka dia niditra an-tsokosoko tao anaty rano indray ilay bibikely manimba efa nisy tao Turkey Creek ary voatery nodiovina. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny ekipa avy ao amin'ny Gator Dredging dia nangatahana mba hanala ny moka biolojika izay hita izao ao ambanin'ny dock hita any amin'ny faritra marivo sy mameno lavaka lalina manerana ny faritra manodidina an'i Turkey Creek izay voadona noho ny fahasimban'ny tafio-drivotra.
Ny roa amin'ireo fanamby goavana atrehin'ny ekipa avy amin'ny Gator Dredge mandritra ny dingan'ny fanadiovana tamin'ity indray mitoraka ity dia nahitana fitaovana fitantanana sy fifehezana ny fiverenan'ny rano. Izany dia satria, nandritra ny efa ho dimampolo taona, tsy niraharaha ny toetran'ilay renirano ny tompon'andraikitra eo an-toerana sy ny fanjakana, ny fiatraikan'ny muck teo amin'ny fahasalaman'ny mponina, ary ny fiantraikany tamin'ny toeram-ponenana manodidina.
Ny dredging no fototry ny ankamaroan'ny tetikasa anaty rano ary miresaka betsaka amin'ny filàna ara-bola, ara-tsosialy ary ara-tontolo iainana. Miaraka amin'ny 50 isan-jaton'ny mponina manerantany miaina ao anatin'ny velaran-tany 125 kilaometatra amoron-dranomasina manan-danja, ireo faritra iva toa an'i Turkey Creek dia tandindomin-doza noho ny tondra-drano lehibe ary mitaky fanatsarana hatrany hatrany sy eo akaikin'ny morony.
Ireo faritra teostika toa an'i Turkey Creek dia niaina fisondrotry ny rano nateraky ny rivo-mahery mahery toa ny Hurricane Irma. Ny valiny dia ahitana fahasimbana fananana ho an'ny tompon-trano an-jatony tratry ny rivo-doza mahafaty, ary koa misy fiantraikany amin'ny toeram-ponenana manodidina izay miteraka vola amina tapitrisa dolara raha tsy avela.
Koa nahoana zava-dehibe ny fandevenana? Rehefa trondron-drano ny rano iray dia tsy dia misy ny firongatry ny fikaohon-dranomasina ary naverina amin'ny laoniny ny toeram-ponenana manodidina. Misy karazana sediment marobe misy poizina avy amin'ny rano maloto indostrialy izay misy fiatraikany lehibe amin'ny kalitaon'ny rano.
Raha nesorina ireo karazana daroka misy loto, dia mihatsara ny fahasalamana ankapobeny ao anaty rano.